Vakuru veMbada Vanotadzazve Kumira Pamberi peKomiti yeParamende
Vakuru ava vanga vadaidzwa zvakare nekomiti kuti vauye kuzomira pamberi payo. Pekutanga chachigaro ve Mbada Holdings, Va Robert Mhlanga, vakaenda kukomiti iyi vega, asi vakaudzwa kuti vauye nevamjwe vavo.
Vakuru vemakambani yeMbada Diamonds neCanadile, ayo ari kuchera mangoda kwaMarange, vatadza zvakare neMuvhuro kunomira pamberi pekomiti yedare reparamende iri kuongorora nyaya yemangoda ekwaChiadzwa.
Vakuru ava vanga vadaidzwa zvakare nekomiti kuti vazomira pamberi payo. Pekutanga, sachigaro veMbada Holdings, Va Robert Mhlanga, vakaenda kukomiti iyi vega, asi vakaudzwa kuti vauye nevamwe vavo.
Va Mhlanga vakazonyora tsamba vachiti havakwanisi kumira pamberi pekomiti iyi nebhodhi rose sezvo vamwe vasipo. Va Mhlanga, gurukota remigodhi, Va Obert Mpofu, munyori webazi remigodhi, Va Thankful Musukutwa, pamwe neve Canadile, vanonzi vanyora tsamba dzakafanana neMuvhuro vachiti havasi kuzomira pamberi pekomiti iyi kusvika nyaya iri kumatare pakati pehurumende ne African Consolidated Resources, yekuti ndiani ane mvumo yekuchera mangoda kwaMarange, yapera.
Va Moses Mare imwe yenhengo dzekomiti iyi. Va Mare vanoti komiti yavo riri kushamiswa kuti veMbada, Canadile nebazi rezvemigodhi vava kuti vari kuda kutevedzera mitemo asi munguva zhinji vanga vari kuramba kuita zviri kutaurwa nematare kuti ACR dai yadzokera kunochera mangoda sezvo iri iyo ine mvumo pamutemo kuchera mangoda aya.
Vati komiti yavo ichashandisa mutemo we Priviliges, Immunities and Powers of Parliament Act, kuti imanikidze vakuru vese ava kuti vamire pamberi pekomiti vachipindura mibvunzo.
Komiti iyi yanyora tsamba zvekare kwavari vese kekupedzisira ichivakurudzira kuti vamire pamberi payo vachipindura mibvunzo yemangoda ekwaMarange.